streaks igazi grudnichka sezinyawo - ngokuqinisekile iyimbangela yokukhathazeka futhi ukunakekela impilo yakhe. Kungenzeka ngenxa yezizathu eziningi, ngokulandelana, futhi isenzo ezimweni ezahlukene kufanele ibe khona ehlukile. Okokuqala kubalulekile ukubeka eceleni isimo esisongela ukuphila.
ukutheleleka emathunjini - akusiyo ngokuvamile kakhulu (njengoba ingane feeds, ikakhulukazi ubisi lwebele, ifomula kanye izicupho zilungiswe ngokucophelela), kodwa imbangela abesabekayo igazi endleni yabantu abanaleli ingane kuze kube unyaka. Ngokuvamile, aba maningi amathuba okuba yokuthola i-ingane endala. Kodwa aluqede ngokuphelele ukutheleleka, sithembele kuphela ubudala, awukwazi. Uma, ngaphezu sohudo siqhamuke nje futhi sinamandla (ikakhulukazi ngegazi ne isikhwehlela), ingane imfiva, uvele ukuhlanza, futhi kukhona izimpawu ubuhlungu esiswini, khona-ke Kuyaphuthuma ukuba aye kudokotela - ingane ezifweni ezithathelwanayo. By the way, ukunquma ukuthi usana sika kwesisu ubuhlungu, kungaba ku ubufakazi bezimo: ingane ziyokhamuluka nikhale, ukudonsa imilenze ukuze lwesisu, uma uzama uthinte ukuthi kuwukubonakaliswa kuyokhula.
izifo olunamandla emathunjini ayingozi, okokuqala kunakho konke, i-amanzi emzimbeni ngokushesha. Ngemva kwamahora ambalwa nje ingane nge indle nihlanze ukulahlekelwa imali ezibucayi okusamanzi. Kumelwe ungalibali! Cishe ingane yakho izodinga yokwelapha ngemithi elwa namagciwane, desoldering ngokucophelela futhi mhlawumbe ukuvuza. Kodwa zonke lezi aphoyintimenti kumele kwenziwe ngudokotela. Ukukhetha Independent kwamaphilisi umane ukubulala ingane.
Enye imbangela enkulu igazi endleni yabantu abanaleli ingane - a isimiso wamathumbu, okuyinto Ivame ukubizwa ngokuthi volvulus wamathumbu. Ngeshwa, Lesi sifo siphatha kakhulu kule isimo izingane ezingaphansi konyaka abangekho ibhodlela. Nalapha iphawule zimpawu: ubuhlungu, ukukhala, ukwenqaba ukuba adle, futhi isihlalo - "ujeli we-raspberry" (igazi, exutshwe isikhwehlela) noma igazi nje amahlule. Lesi simo kufanele bungaveli ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi kuphela ukuhlinzwa ezingane. Unganqikazi ukubiza "ambulensi."
Kodwa namanje imbangela evame kakhulu kwegazi endleni yabantu abanaleli ingane - kungcono nezinkinga nge ukudla, noma kunalokho nokwenziwa ukudla. Inkinga yokuqala - komzimba. Noma yimuphi ukudla kanye Izingxube kungaba baxabane nomzimba. Ngenxa edema evelele we mucosa emathunjini nokugeleza kwegazi esilimele izindonga, okuholela ukopha. Le nqubo isikhathi esiningi futhi ngezinye izikhathi kufihlwe, okuholela sokuntuleka kwegazi kanye imisiwe enganeni.
Ngokuvamile komzimba wabonakaliswa ngokuyinhloko ukuqubuka, diathesis, okungenani - ukubambezeleka isisindo somzimba. Ukuqubuka ingase yenziwe yaba yasendaweni cishe noma kuphi (hhayi nje ku izihlathi, njengoba kukholelwa kanjalo ngokuvamile). izakhi zawo ziyisikhumbuzo ngokubomvu, anolaka, ngokuvamile basuke shelled. Isithombe efanayo nokuthi lactase ukuntula. Lokhu imbangela igazi sezinyawo e ingane lihlotshaniswa ukukhiqizwa enganele enzyme ukuthi inhlabamkhosi ubisi. Isimo edinga ahlolwe kahle emzimbeni, njengoba izifo eziningi lesi simo singenzeka ne isithombe efanayo.
By the way, ngezinye izikhathi streaks igazi kwesihlalo kungenzeka nge ukuqunjelwa ezingalapheki. Kodwa ezinsaneni ngempela kakhulu ezingavamile.
Kungakhathaliseki ukuthi sasiyini isizathu, uma ingane kutholakala igazi sezinyawo - ukwelashwa lekufanele yentiwe ngaphansi kweso lwezokwelapha. Futhi izibonakaliso sebuhlungwini obunzima zidinga ukwelashwa okusheshayo usizo oluphuthumayo lwezokwelapha.
Cream esilucwecwana imiqulu, esilucwecwana amakhekhe isihlabathi ikhekhe. zokupheka okumnandi futhi elula
Silungiselela ebusika utamatisi jelly
Ibhayisikili "Stealth Navigator-510" (Stels Navigator): Uhlolojikelele, izici nezilinganiso